Thursday March 21, 2019 - 20:20:12 in Wararka by Liibaan Jeexoow
20-kii Bishii maarso sanaddii 2003 ayay ciidamada mareykanka duullaan cirka iyo dhulka ah ku qaadeen ciraaq oo xilligaas uu maamulayay kaligii taliye Saadaam Xuseen.
Duullaanka Mareykanka ee Ciraaq oo qeyb ka ahaa xamladii saliibiga ee xilligaas uu iclaamiyay G.W.Buush madaxweynihii hore ee mareykanka ayay America ka dhaxashay jab aan kasoo waaqsasho laheyn.
Dhowr iyo toban sanadood kadib duullaankaas ayay Mareykanku markale dib ugu laabteen Ciraaq markii ay iclaamiyeen in dagaalkii weynaa ay soo gaba gabeeyeen sanaddii 2011 ayna ciidamadooda badankood kala baxeen wadanka.
khasaaraha dhimashada ciidamada mareykanka ee dagaalka ciraaq ayuu qoraaga caamir Cabdul Muncin ku sheegay sanaddii 2010 50 kun askari laakin USA ayaa diiday oo dhimashada ciidamadeeda Ciraaq kusoo koobtay Afar iyo Boqolaal.
Dadka Ciraaqiyiinta ah ee ciidamada Mareykanku gacmahooda ku laayeen ayay hay'ado laga leeyahay dalka Ingiriiska ku sheegeen 106 kun oo qof, dadkaas oo ay ciidanka Americank ah rasaas ku toogteen.
Markazka ORB ayaa tirakoob cusub oo sanadkaan uu kasoo saaray khasaaraha ka dhashay duullaanka Ciraaq wuxuu ku sheegay hal milyan iyo 33 kun oo qof laakin laba Urur ingiriis ah waxay sheegeen in dhimashada guud ee ka dhalatay duullaanka Ciraaq ay gaarsiisantahay Hal milyan oo qof halka tirakoobyo kale ay sheegayaan in dhimashadu ay tahay 654 kun oo qof.
Si walba oo ay ahaato 5000 askari amerikaan ah ayaa wali ku sugan ciraaq halkaas oo ay muslimiinta sunniga ah dhagaro ugu maleegayan.